Amabhishi Ahamba Phambili AseMelbourne | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | Australia, Amabhishi
Uma ufuna ukuya eMelbourne eholidini, mhlawumbe ufuna ukuvakashela konke ongakwenza kuleli dolobha elikhulu lase-Australia laseVictoria. Ku-2011 wakhethwa njengedolobha elihle kakhulu emhlabeni ukuhlala kulo, into ngokungangabazeki eyenza abantu abaningi bafune ukuvakashela futhi bazi leli dolobha.
Itholakala ngasogwini lwePort Phillip Bay. Ngaphezu kwalokho, inesakhiwo samaVictoria nesesimanje esinikeza izivakashi zayo amanye amabhishi amahle kakhulu e-Australia. Ngemuva kwalokho Ngifuna ukukutshela ngamabhishi amahle kakhulu eMelbourne Ngakho-ke uma uya kuleli dolobha elikhulu lase-Australia uyofuna amabhishi amahle, unohlu oluhle ongakhetha kulo futhi ulijabulele.
1 Ibhishi iSt. Kilda
2 Ibhishi laseBrighton
3 UMordialloc Ibhishi
4 UWilliamstown Beach
5 Ibhishi laseSorrento
6 Elwood Ibhishi
7 I-Altona Beach
8 Amanye amabhishi kufanele uwazi
Ibhishi iSt. Kilda
Olunye lwamabhishi aziwa kakhulu ngokungangabazeki iSt. Kusukela pier has a ngohambo olukhulu nge izihlabathi amahle, ungakwazi ukujabulela ukubukwa ongakholeki komuzi.
Uma ufika kuleli bhishi ungathatha isikebhe esikusa eWilliamstown noma eSouthbank. Enye indlela enhle yiBrighton Beach, elinye lamabhishi amahle kakhulu eMelbourne. Inezindlwana zokugeza ezinemibala ehlukahlukene olayini lolwandle, iyindawo ekahle yokubhukuda, yokugezela neyokuntweza emanzini. Lapho kuvunguza umoya kunamagagasi ahloniphekile afanele ama-surfers, yize kuyindawo enhle futhi uma uthanda ukudoba.
Ngaphezu kwalokho, lolwandle luhambo olufushane olusuka ezindaweni zokudlela, ezitolo nasezindaweni zokudlela ezinhle, okwenza iBrighton Beach ibe ngolunye oludume kakhulu.
Uma lokhu okudingayo kungulwandle olunokuningi kunesihlabathi namanzi, lapho-ke uzothanda iMordialloc. IMordi yindawo eseningizimu-mpumalanga nendawo okufanele uyivakashele ngobuhle bayo. Inendawo yokudlela, inkundla yokudlala izoso, izindawo zepikiniki, indlela yebhayisikili ... kanye nendawo yokubiyela ongathanda ukuyivakashela.. Ibhishi elidume kakhulu, ngakho-ke uma ufuna ukugwema izixuku ezinkulu kungcono ukugwema ukuya ngezimpelasonto.
Leli bhishi laziwa ngabantu bendawo ngokuthi yi-'Willy Beach ', lincane kakhulu kepha linobuhle obuningi, ngaphezu kwalokho, lisondele kakhulu edolobheni. Ibhishi elidumile lababhukudi, abasebenza ngelanga, nabasolwandle, kepha kuyimibono emangalisayo edonsela abantu eWilliamstown yomlando. Uma uzothola izimangaliso zayo uzokwazi ukuthi ngikhuluma ngani.
Ukuhamba nje ngemizuzu emihlanu ukusuka esiteshini sesitimela uzothola umbono ocacile futhi ongaphazanyiswa komkhathi wedolobha - omuhle emini nobabazekayo ebusuku. Akumangalisi I-Williamstown ube yindawo ekahle yokufinyelela ku-New Years Eve, lapho abantu abaningi bebuthana khona ukwenza iziqhumane ezithandwa ngabantu bonke.
Ibhishi laseSorrento liyintokozo yasolwandle. Eduzane namanzi ePort Phillip Bay ngoba inawo ohlangothini olulodwa neBass Strait kolunye uhlangothi, iyindawo enhle yokujabulela ukushona kwelanga. Kuyafaneleka ukuthatha uhambo ukujabulela ubuhle besihlabathi saso namanzi aso.
Ukuhamba ngemizuzu engu-20 ukusuka enkabeni yedolobha iMelbourne, Elwood Ibhishi likhanga elikhulu kuwo wonke umndeni. Ngaphandle kogu lolwandle kunezindawo eziningi zokuthokozela usuku olufana nokosa inyama, amapikiniki nezindawo zokudlala otshanini. Njengokungathi lokho bekunganele, inezindawo eziphephile zokukwazi ukubhukuda buthule, noma ngabe uthanda ukuhamba ngaphezulu, hamba futhi uhambe ngebhayisikili ogwini.
I-Altona yaseMelbourne iyindawo enhle uma ufuna usuku lwamavila olwandle. Kudala, amanzi ase-Altona ayedume ngenani elimangalisayo le-algae ayenalo. Namuhla, ngokuhlanzwa kwansuku zonke okwenziwa ochwepheshe bendawo, amanzi e Altona Zihlanzeke kakhulu kunakuqala futhi yindawo enhle yokubhukuda.
Kukhona ingxenye yolwandle enikezelwe ngokukhethekile kitesurfing. Njengokungathi lokho bekunganele, ibuye inezinhlobonhlobo zokudlela, amathilomu nezinye izindawo zokuzijabulisa ongazijabulela.
Amanye amabhishi kufanele uwazi
Ngaphezu kwawo wonke amabhishi engisanda kukutshela ngawo - ukuthi ungabhala phansi kahle ukuze ubone lawo onentshisekelo kuwo kakhulu-, kukhona namanye futhi azokuthakazelisa impela nokuthi uma unesikhathi esithe xaxa , ungacabanga ngokubazi futhi. Ezinye zikhona (futhi konke kuhle ukujabulela nomndeni):
ICarrum - emlonyeni woMfula iPatterson-
Njengoba ubonile, kunamabhishi amaningi azungeze iMelbourne. Uma uhlela ukuhambela eMelbourne uzothola ukuthi kuleli dolobha lase-Australia ungathola amabhishi ngakho konke ukuthanda, ukujabulela ukugeza, ukwenza imisebenzi yamanzi, ukuchitha usuku nomndeni, ukuba nokosa inyama, ukujabulela ipikinikini yantambama noma kalula, ukuhamba nokujabulela ubuhle bendawo.
Ukuya olwandle kungumbono omuhle ukubalekela emadolobheni amakhulu, ngoba iMelbourne idolobha lesibili elinabantu abaningi e-Australia, ngakho-ke uyakwazi ukubona ukuthi impilo ingakhathaza kanjani phakathi kwezitaladi zayo. Ezakhamuzini zalo, amabhishi afana nevelufa yokuphunyuka ukuze ajabulele impilo ngaphandle kwedolobha, ukukhohlwa imisebenzi yansuku zonke nokujabulela isimangaliso, ubukhulu kanye nokuba yigugu kolwandle okudlulisela kithi nokuthi sizizwa kahle kanjani.
Ngakho-ke uma unethuba lokuhambela kuleli bhishi lase-Australia, unganqikazi ukuthatha imephu, bona ukuthi uzohlala kuphi futhi uthole nolwandle oluthanda kakhulu ukuchitha usuku futhi ulijabulele. Futhi uma ufuna ukuzibandakanya bese ubheka izinto zokuhamba zomphakathi noma uqashe imoto ukuze uthathe indlela emfushane futhi wazi amabhishi aphezulu kakhulu ngesikhathi ovakashile ngaso.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Amabhishi » Amabhishi amahle kakhulu eMelbourne